Burcad-badeed Somali ah oo siidaayey markab Jarmal ah iyo shaqaalihii saarnaa, kadib lacag madax furasho ah oo la siiyey. [Akhris …] – Radio Daljir
Burcad-badeed Somali ah oo siidaayey markab Jarmal ah iyo shaqaalihii saarnaa, kadib lacag madax furasho ah oo la siiyey. [Akhris …]
Agoosto 4, 2009 12:00 b 0
Xaradheere, Aug 04 – Koox buracd-badeed Somali ah oo in mudda ah haystay markab laga leeyahay dalka Jarmalka ayaa siidaayey kadib markii ay gacanta ku dhigeen lacag aad u tiro badan oo madax-furasho ah.
Kooxda Burcad badeedda ah ee haysatay markabkaan ayaa la sheegay in ay qaateen lacag madax-fursho ah oo gaaraysa illaa 3Milyan oo dollar, taasi oo muddo badan gor-gortan xooggani ka socda isla meeldhigiteeda, hase yeeshee markii danbe shirkadda markabkaasi leh ay go?aansatay in ay lacagtaasi dhiibto.
Markabkaan ayaa gacanta burcad badeeda soo galay bishii April ee sanadkaan, waxaana ay haysteen muddo ka badan 3bilood iyagoo dhowr jeer ku hanjabay tallaabo cusub in ay qaadi doonaan haddii aan si deg deg ah loo siin lacagta ay dalbadeen.
Markabka la siidaayey ayaa waxaa saarnaa shaqaale u kala dhashay dalalka Jarmalka, Yugrayn, Filibiin iyo Ruushka, kuwaasi oo dhammaantood la tilmaamay in ay xaaladdooda caafimaad ahayd mid wanaagsan, waxaana markaabkaasi iyo shaqaalihiisiiba hadda ku sii jeedaan halkii ay markii hore u socdeen.
Muddooyinkii ugu danbeeyey waxaa si xoogleh isku dhimay falalkii burcadda baduhu ay ku tallaabsan jireen, waxaana taas loo aanaynayaa ciidamo xooggan oo wadamada adduunka ay soo dhoobeen biyaha caalamiga ah si ay uga hortagaan ugaarsiga gaadiidka badda lagu hayo.
Ciidamada booliska Australia ayaa sheegey in afar ruux oo shalay laga qabtay magaaala Sydney ee waddankaas ay qorshaynayeen in weeraro ismiidaamin ah ku qaadaan xero ciidamada milatariga dalkaas ay ku leeyihiin duleedka Sydney.
Juxa, wasiirka tacliinta ee Puntland oo qaabilay macallimiin wax ku soo baratay jaamacada Camuud ee gobolka Awdal. [Dhegaysi …]